Jose Mourinho oo hadlay kaddib Koobkiisii ugu horreeyay ee Man United….(Maxay tahay sababtii uu u badelay Juan Mata uu markii horeba badel ku keenay?) – Gool FM
Jose Mourinho oo hadlay kaddib Koobkiisii ugu horreeyay ee Man United….(Maxay tahay sababtii uu u badelay Juan Mata uu markii horeba badel ku keenay?)
(London) 07 Agoosto 2016. Jose Mourinho ayaa koobkiisii ugu horreeyay kula guuleystay kooxdiisa cusub ee Man United kaddib markii ay 2-1 kaga adkaadeen Leicester City Community Shield.
Waxyaabaha yaabka ka ahaa kulanka ayaa ahaa in Jose Mourinho uu badelay Juan Mata uu markii horeba badel ku keenay ciyaarta waxaana xusid mudan in Jose uu Mata ka soo diray Chelsea isagoo ka iibiyay Man United wuxuuna iminka u muuqdaa mid ka diri raba Red Devils.
“Bandhiga qeybtii hore ee ciyaarta ayaa aad uga wacnaa midka qeybta labaad. Kooxdu weli taam ma ahan,”. Jose ayaa sidaa ku waramay.
“Marka ay Leicester City kordhisay karaarka, waxay lahaayeen saddex ciyaartoy oo dheereysa wayna badeleen kulanka, waa guul muhiim ah laakiin waxaa inoo taala shaqo badan oo ay tahay inaan qabano, ma noqonayo mid damaaci ah haddii aan iraahdo wuxuu ahaa bandhig cajiib ah, ma ahayn, markasta waa muhiim inaad koob ku bilaabato.
“Zlatan wuxuu noqonayaa mid aad u sii khatar badan marka aan kulanka xukumeyno aana ku ciyaareyno meel ku dhow diilinta ganaaxa, ma ahan ciyaaryahan dheereeya sida Jamie Vardy, kaa oo ka ciyaari kara meel 50-yard u jirta diilinta ganaaxa. Wuxuu Ibra u baahan yahay in kooxdu ciyaarto ayna u abuurto fursado, waxaynu u baahannahay inaan badelno midan.”.
“Waxaan guushan u hadiyeeyay 7-ciyaartooy oo aan ku soo darin shaxda iyo Louis Van Gaal kaa oo ku guuleystay koobka si aan halkan u dhimaano.”.
Dhanka kale Jose Mourinho oo ka hadlay badelkii uu ku sameeyay Juan Mata oo kolkii horeba badel ku yimid ciyaarta ayaa yiri:
“Waan ogayahay waxaan sameeyay wax aysan fiicnayn in la sameeyo taa oo ah inaan badelay Mata, laakiin iminka wuu faraxsan yahay.
“Wuxuu xeerka inoo ogolaaday lix badel, waxaana doonay inaan hakad galiyo kulanka, si aan waqtiga u dilo, hal ciyaaryahan ayaa ii harsanaa inaan keeno, waxayna noqotay inaan soo bixiyo kan ugu yar.
“Si fiican ayuu u ciyaaray wuxuuna I siiyay wixii aan doonayay.
“Hasayeeshee, waan ogaa inay ciyaarta ku dhammaaneyso kubbado dhaadheeer, sidaa darteed ma soo bixin karin Ibrahimovic ama Marouane Fellaini hubaashii, mata waa kan ugu yar.”.
Muxuu Pogba ka yiri wararka sheegaya inuu tijaabada caafimaadka u marayo Man United?
Liverpool oo afar gool lagu xaaqay saacado yar uun kaddib markii ay 4-gool uga soo adkaadeen Barcelona…+SAWIRRO